Lysozyme Chloride (လိုင်ဆိုဇိုင်း ကလိုရိုက်ဒ်) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ဆေးဝါးများ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဝါးများအားလုံး » Lysozyme Chloride (လိုင်ဆိုဇိုင်း ကလိုရိုက်ဒ်)
Lysozyme Chloride (လိုင်ဆိုဇိုင်း ကလိုရိုက်ဒ်) ကဘာလဲ။
Generic Name: Lysozyme Chloride (လိုင်ဆိုဇိုင်း ကလိုရိုက်ဒ်) Brand Name(s): Generics only. No brands available.
Lysozyme Chloride (လိုင်ဆိုဇိုင်း ကလိုရိုက်ဒ်) ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
Lysozyme chloride ကို ရောင်ရမ်းခြင်း၊ နာတာရှည် ထိပ်ခတ်နာ၊ ချွဲ ဟတ်ထုတ်ရ ခက်ခြင်း၊ အသေးစား ခွဲစိတ်မှု အတွင်း သို့မဟုတ် ခွဲစိတ်ပြီးနောက် သွေးထွက်ခြင်း စသည်တို့ အတွက် အသုံးပြုသည်။
Lysozyme Chloride (လိုင်ဆိုဇိုင်း ကလိုရိုက်ဒ်) ဘယ်လိုသောက်သုံးသင့်သလဲ
Lysozyme chloride ကို ပါးစပ်မှ သောက်ပါ။ ညွှန်ကြားထားသည့် အတိုင်း တိကျစွာ သောက်ပါ။ ဆေးဘူး တွင် ညွှန်ကြားထားသည်ထက် ပိုများစွာ သို့မဟုတ် ပိုနည်းစွာ မသောက်ပါနှင့်။ ဆရာဝန် ညွှန်ကြားသည့်အတိုင်း သောက်ပါ။
Lysozyme Chloride (လိုင်ဆိုဇိုင်း ကလိုရိုက်ဒ်) ဘယ်လိုသိမ်းဆည်းရမလဲ
Lysozyme chloride ကို အခန်းအပူချိန်တွင် တိုက်ရိုက်အလင်း နှင့် စိုထိုင်းမှုတို့မှ ကင်းဝေးအောင် သိမ်းဆည်းရမည်။ ဆေးပျက်စီးခြင်းမှ ကာကွယ်ရန် Lysozyme chloride ကို ရေချိုးခန်း သို့မဟုတ် ရေခဲ သေတ္တာတွင် မသိမ်းဆည်းပါနှင့်။ Lysozyme chloride တွင် မတူညီသော ကုန်တံဆိပ်များစွာရှိသည်။ တံဆိပ်ပေါ် မူတည်ပြီး သိမ်းဆည်းမှုပုံစံ ကွဲပြားနိုင်သည်။ သိမ်းဆည်းမှုနှင့် ပတ်သက်သော ညွှန်ကြားချက်များအတွက် ဆေး၏ ဘူးကို အမြဲစစ်ရန် အရေး ကြီးသည်။ သို့မဟုတ် ဆေးရောင်းသူနှင့် တိုင်ပင်ပါ။ ဆေးများအားလုံးကို ကလေးနှင့် အိမ်မွေး တိရစ္ဆာန်များမှ ဝေးရာနေရာတွင် ထားပါ။
ညွှန်ကြားထားခြင်းမရှိဘဲ Lysozyme chloride ကို အိမ်သာထဲ ထည့်ခြင်း၊ ရေဆင်းပိုက်ထဲ ထည့်ခြင်း မပြုပါနှင့်။ သက်တမ်းကုန်သွားပါက သို့မဟုတ် မလိုအပ်တော့ပါက ထိုထုတ်ကုန်ကို သင့်တော်စွာ စွန့်ပစ်ရန် အရေးကြီးသည်။ ထုတ်ကုန်ကို ဘေးကင်းစွာ စွန့်ပစ်နိုင်ရန် ဆေးဝါး ကျွမ်းကျင်သူနှင့် တိုင်ပင်ပါ။
Lysozyme Chloride (လိုင်ဆိုဇိုင်း ကလိုရိုက်ဒ်) အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
သင်သည် Lysozyme chloride သို့မဟုတ် အခြားဆေးများ၏ ပါဝင်ပစ္စည်းများနှင့် ဓါတ်မတည့်ပါက။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန် ဒါမှမဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်မှာ Lysozyme Chloride (လိုင်ဆိုဇိုင်း ကလိုရိုက်ဒ်) ကိုသုံးစွဲဖို့ စိတ်ချရပါသလား
ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ် နှင့် ကလေးနို့တိုက်စဉ်တွင် Lysozyme chloride သုံးခြင်းသည် ဘေးကင်းသလားကို သေချာ မသိရှိပါ။ Lysozyme chloride မသောက်မီ ဖြစ်နိုင်သော အကျိုး ကျေးဇူးနှင့် အန္တရာယ်များကို ချိန်ညှိရန် ဆရာဝန်နှင့် အမြဲတိုင်ပင်ပါ။
Lysozyme Chloride (လိုင်ဆိုဇိုင်း ကလိုရိုက်ဒ်) ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်သလဲ
အဖြစ်အများဆုံး ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများမှာ အရေပြား အဖုအပိမ့်များ သို့မဟုတ် နီရဲခြင်း၊ ဝမ်းလျှောခြင်း၊ အစာအိမ် နှင့် အူလမ်းကြောင်း မသက်သာခြင်း၊ အစာ စားချင်စိတ် မရှိခြင်း တို့ဖြစ်သည်။
ဘယ်ဆေးတွေက Lysozyme Chloride (လိုင်ဆိုဇိုင်း ကလိုရိုက်ဒ်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Lysozyme chloride သည် သင်လက်ရှိသောက်နေသော အခြားဆေးများနှင့် ဓါတ်ပြုနိုင်ပြီး ဆေး၏အလုပ်လုပ်ပုံကို ပြောင်းလဲစေနိုင်သည်။ ပြင်းထန်သော ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ ဖြစ်နိုင်ချေကို မြင့်စေသည်။ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သော ဆေး တုံ့ပြန်မှုများ ကို ရှောင်ရန် သင်အသုံးပြုနေသော ဆေးများ အားလုံးကို စာရင်းပြုပြီး ဆရာဝန်၊ ဆေးဝါးပညာရှင်အား ပြပါ။ ဘေးကင်း စေရန် ဆရာဝန် သဘောတူမှုမပါဘဲ ဆေးပမာဏ ကို ပြောင်းခြင်း၊ ရပ်ခြင်း၊ စတင်ခြင်း မပြုပါနှင့်။
အစားအသောက်တွေနဲ့ အရက်က Lysozyme Chloride (လိုင်ဆိုဇိုင်း ကလိုရိုက်ဒ်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလား
Lysozyme chloride သည် အစာ သို့မဟုတ် အရက် နှင့် ဓါတ်ပြုနိုင်ပြီး ဆေး၏ အလုပ်လုပ်ပုံကို ပြောင်းလဲစေ သည်။ ပြင်းထန်သော ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ ဖြစ်နိုင်ချေကို မြင့်စေသည်။ ဆေးမသောက်မီ အစာ သို့မဟုတ် အရက်နှင့် ဓါတ်ပြုခြင်း ဖြစ်နိုင်သလားကို ဆရာဝန်၊ ဆေးဝါးပညာရှင်နှင့် တိုင်ပင်ပါ။
ဘယ်ရောဂါအခြေအနေတွေက Lysozyme Chloride (လိုင်ဆိုဇိုင်း ကလိုရိုက်ဒ်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Lysozyme chloride သည် သင့်ကျန်းမာရေး အခြေအနေများနှင့် အပြန်အလှန်သက်ရောက်မှုရှိသည်။ ထိုသက်ရောက်မှုသည် သင့်ကျန်းမာရေး အခြေအနေကို ပိုဆိုးစေခြင်း သို့မဟုတ် ဆေး၏အလုပ်လုပ်ပုံ ပြောင်းသွားခြင်း ကိုဖြစ်စေနိုင် သည်။ သင့်တွင် လက်ရှိ ရှိနေသော ကျန်းမာရေး အခြေအနေ အားလုံးကို ဆရာဝန်နှင့် ဆေးဝါးပညာရှင်အား အသိပေးထား ရန် အရေးကြီးသည်။
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေအတွက် Lysozyme Chloride (လိုင်ဆိုဇိုင်း ကလိုရိုက်ဒ်) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
ပုံမှန် တစ်ခါသုံး ဆေးပမာဏ။ ၉၀ မီလီဂရမ် နေ့စဉ် ၂-၃ ကြိမ်
ကလေးတွေအတွက် Lysozyme Chloride (လိုင်ဆိုဇိုင်း ကလိုရိုက်ဒ်) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
Lysozyme Chloride (လိုင်ဆိုဇိုင်း ကလိုရိုက်ဒ်) ကိုဘယ်လိုရရှိနိုင်သလဲ
Lysozyme chloride ကို အောက်ပါပုံစံ၊ ပြင်းအားများဖြင့် ရနိုင်ပါသည်။
ဆေးပြား ၉၀ မီလီဂရမ်
Lysozyme chloride သောက်ရန် မေ့သွားပါက တတ်နိုင် သလောက် မြန်မြန်ပြန် သောက်ပါ။ သို့သော်လည်း နောက်တစ်ကြိမ် သောက်ရန် အချိန်ရောက်သွားပါက မေ့သွားသော အကြိမ်ကို ကျော်ပြီး ပုံမှန်အတိုင်း ဆက်သောက်ပါ။ နှစ်ကြိမ် ထပ်မသောက်ပါနှင့်။
Lysozyme Chloride.http://www.mims.com/myanmar/drug/info/suzyme?type=full. Accessed May 7, 2017